Ithemmix entsha TM5 | ThermoRecipes
Ithemmix entsha TM5
UMayra Fernandez Joglar | | ngokubanzi
Namhlanje, ngoMvulo, entsha iyathengiswa eSpain. Ithemmix entsha TM5 ebiziswe ngoLwesihlanu kwihlabathi liphela Vorwerk.
Ngale robhothi yekhitshi baphucule amanqaku awohlukileyo kwimodeli edumileyo TM31 Ukulungelelanisa neemfuno zabasebenzisi.
Kodwa masihambe ngamacandelo:
1 Baye baguqula ntoni?
3 Ndifuna ukuthenga iThermomix TM5
Baye baguqula ntoni?
Ngaphandle koyilo lwe-ergonomic kunye nohlaziyo, iVorwerk yenze utshintsho olwahlukileyo njengakwi Varoma kunye iglasi abane ubukhulu obukhulu. Ayisiyo yokuba umahluko ugqithisile, kodwa ulunge ngakumbi kwiintsapho ezinkulu. I-Varoma entsha inomthamo weelitha ezingama-3,3 kunye neglasi yeelitha ezingama-2,2.
Indebe kunye nebhabhathane ziye zahlaziywa. Uyilo luyafana kodwa zangoku ukwenza ngcono imisebenzi yayo.
Apho kuye kwakho utshintsho olubalulekileyo bekukho kwisivalo ukuvalwa kwaso Ithemmix entsha TM5 iya kuba ngokuzenzekelayo. Kukwindawo yokukhetha ubushushu, ngoku uyakwazi ukupheka nge-120º. Injini iyakwenza ingxolo encinci kwaye isilumkiso sokulumkisa siya kwahluka ukusukela ngoku.
Enye into entsha kukuba ine yokuthinta isikrini umbala kunye nokukhetha okukodwa apho ungalawula khona ixesha, ubushushu kunye nesantya.
Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo inkqubela phambili enkulu ibe yinkqubo yayo Ukupheka okuKhokelwayo. Sisixhobo esinecala apho ungafaka khona iThermomix Digital Books. Isixhobo siza kubonisa ngokuzenzekelayo imiyalelo yeresiphi inyathelo ngenyathelo, silungelelanisa ubushushu kunye nexesha. Ngale ndlela, abasebenzisi kuya kufuneka bongeze kuphela izithako kwaye basebenzise ulawulo lwesantya.
Ndiqinisekile ukuba abasebenzisi abatsha bayazithanda zonke ezi zinto zintsha kodwa kuthekani malunga nathi esinayo ezinye iimodeli?
Abo kuthi banemodeli ye-TM31 akufuneki bakhathazeke kuba iiresiphi kunye neencwadi ziyiyo iyahambelana ngokupheleleyo. Inendawo ejikelezayo yasekhohlo, isikali kunye nesantya esiphakamileyo, nangona ngoku bayibiza ngokuba "ngumsebenzi wokuxova"
Kuya kuxhomekeka kwilizwe ngalinye nakwimali yalo. Apha eSpain, ixabiso liya kuba 1100 € kwaye iya kubandakanya isiseko somatshini, ikomityi yentsimbi engenasici, ibhasikithi, ibhabhathane kunye nespatula, i-varoma kunye nencwadi yedijithali eneendlela zokupheka eziyi-197 ezithatha indawo ye "Essential" kwaye inelungelo "Ukupheka okulula nokusempilweni".
Ndifuna ukuthenga iThermomix TM5
Ukuba ufuna ukuthenga iThermomix TM5 entsha kufuneka ungene kwicandelo Thenga iThermomix TM5 okanye ucofe kwikhonkco elilandelayo.
I-THERMOMIX TM5 NONKE UMNTU ...
Ndiyathemba ukuba uyayithanda le modeli intsha!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Thermorecetas » zihloko » ngokubanzi » Ithemmix entsha TM5
Sapapasha incwadi yethu yokuqala !!
Ezona ndlela zokupheka zibalaseleyo zokusa elwandle kunye nephuli